.: Ko Moe's Electronics Notes :.: Uni-directional And Bi-directional Energy Meter
Uni-directional energy meter ကတော့ ကမ္ဘာမှာ (အထူးသဖြင့် တရုတ်ပြည်မှာ) အသုံးများပြီးသား ပါ။ ရှင်းပါတယ် ကိုယ်သုံးသလောက် ကိုယ်ရှင်းပေါ့။ သာမန်မီတာတွေနဲ့ ကွာခြားချက်က တစ်လုံးချင်းကို လိုက်ဖတ်နေစရာမလိုပဲ Group လိုက်ကို (wireless နည်းပညာတစ်ခုခု သုံးပြီး) လိုက်ဖတ်သွားတဲ့ Digital Meter အမျိုးအစားပါ။ Bi-directional engery meter ကအနောက်နိုင်ငံတွေက စတင်ပြီး ခေတ်စားနေတဲ့ စတိုင်လ်ပေါ့ဗျာ။
သဘောတရားက Solar panel, Wind turbine တွေကို အိမ်တွေမှာတပ်ထားတယ် (တစ်အိမ်လုံးပေါ့ဗျာ)။ နေ့ပိုင်းဆိုရင် electricity အသုံးနဲတဲ့အတွက် (ရုံးသွားကြတာများသကိုး) အဲ့ဒီ solar, wind တွေက ရတဲ့ စွမ်းအင်ကို အစိုးရ၊ ကုန်ပနီ တွေကို ပြန်ရောင်းတယ် (Main power grids နဲ့ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ထားလေ့ရှိတယ်)။ ညပိုင်းကျတော့ အဲ့ဒီ grids တွေကနေ electricity ပြန်ဆွဲတယ်။ သဘောက2ways ပေါ့ (အရောင်းနဲ့ အ၀ယ်)။
Bi-directional E-meter (ပုံစံက uni နဲ့ အတူတူပါပဲ)
နောက်ပိုင်း solar, wind စတဲ့ renewable energy တွေကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် သုံးလာကြရင် bi-directional energy meter တွေခေတ်စားလာလိမ့်မယ် လို့ယူဆရကြောင်းပါ။ စလုံးအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအတော်နဲပါတယ်။ ထိုစွမ်းအင်တွေ ပေါများစွာရနိုင်သော ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ (ဘယ်တော့မှန်းမသိသော) တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခေတ်စားလာလိမ့်မယ်၊ အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရကြောင်းပါ။
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, February 16, 2010
Labels: Electrical, Energy Meter, General
Blogger Wednesday, 25 January 2017 at 2:38:00 AM SGT